Cuntada shimbiraha hore ee tigidhada cidhibta waa iib! - Cuntooyinka giraangiraha
Cunnooyinka hore ee shimbiraha ee tikidhada Heels waa la iibinayaa!
Xagaagu ma ahan riyo fog hadda. Maalmo dheeri ah iyo hawo kulul oo soo dhowaanaya taasi waxay ka dhigan tahay inay tahay waqtigii lagu heli lahaa Cuntadaada tigidhada Heels 2018! Xafladaha xagaaga sanadlaha ah ee lagu taageerayo Cuntada Lugaha ayaa lagu wadaa inuu qabsoomo 16-ka Agoosto at Nicollet Island Pavilion.
Waa maxay Cunnooyinka Cidhibtu?
Cunnooyinka Ciribta waa lacag ururin sanadle ah oo loogu talagalay Cunnooyinka Cuntada ee 'Metro Meals on Wheels'. Dhammaan wixii ka soo baxa dhacdadaas waxaa lagu taageeraa Cuntada Lugaha iyo bixinta cunnooyinka caafimaadka qaba ee waayeelka iyo kuwa naafada ah ee ku nool bulshadayada. Cunnooyinka Heellada waxaa ku jira cunno iyo cabitaanno laga cunteeyo makhaayadaha maxalliga ah ee sare, raffles, madadaalo, iyo tartanka caanka ah ee Swank Soles. Tilmaamaha munaasabadda sanad kasta, tartanka Swank Soles wuxuu u dabaaldegaa labada Cunno ee ka soo qayb galayaasha Heels kabaha ugu fiican!
Iibso Hada oo Keydso
Tigidhada Cunnada ee Wheels ayaa hadda la iibinayaa! Ka faa'iideyso shimbiraha hore gaarka ah ee hadda socda oo tikidhadaada ku hel qiimo jaban illaa Maajo 31. Taariikhdaas wixii ka dambeeya qiimaha tigidhada waxay u boodayaan heerkooda caadiga ah waxayna sii joogayaan illaa laga gaarayo dhacdada Agoosto 16.
Hubso inaad hesho lacagtaada Cunnooyinka tigidhada ciribta ee 2018 hadda! Sidoo kale madaxa Cuntada websaydhka Heels iyo Bogga Facebook si aad ula socotid wixii ku saabsan macluumaadka dhacdada iyo ogeysiisyada makhaayadaha markii aan ku soo dhowaanno munaasabadda!
Abriil 13, 2018